Famonoana afo 5 an'i Cozy Kildare hitsidika ity ririnina ity - IntoKildare
mpivady, Food & Drink, Krismasy
Labiera, sakafo ary afo mirehitra - inona koa no ilainao hanafanana ny akoho amin'ity ririnina ity?
Mialà sasatra amin'ny afo misokatra rehefa mangatsiaka any ivelany ny hevitray momba ny fitsangatsanganana ririnina tonga lafatra ka nanodidina ny dimy tamin'ireo tilikambo doro tanety namboarina farany tao Kildare izay heverinay fa tokony andramo.
Mialà sasatra amin'ny sofa mamy ary milentika ao anaty hafanan'ny afo mirehitra - ireo afo mahafinaritra ireo dia miantsoantso mba hotsaboina toa ny tranonao lavitra ny tranonao.
Lahatsoratra zarain'ny The K Club (@thekclubireland)
Ity ve no afomanga mahafinaritra indrindra ao Co Kildare? Ny K Club mahafantatra ny fomba hankalaza ny Krismasy sy ny hariva miala sasatra amin'ny afo miaraka amin'ny vera misy divay mulled na sôkôla mafana toa ny lanitra amin'izao fotoana izao.
Lahatsoratra iray nozarain'i Killashee (@killasheehotel)
Tsy tsapanao fotsiny ve ny hafanana avy amin’io afo io? Angony ny an'ilay zazavavy amin'ny dite tolakandro amin'ny fety sy ny manaraka eo anoloan'ny Killashee's afo malefaka. Ny tolakandron'ny Krismasy tonga lafatra!
Brennans Kilteel Inn manana an'io pub irlandey mahafinaritra io ary amin'ny takariva volana Desambra - inona indray no tadiavinao? Mandehana amin'ny pint ary mety te hijanona mandritra ny dimy hafa ianao. Ny Brennan's ao Kilteel dia mety ho toa mahazatra noho ny fampiasana azy amin'ny fakàna sary ao amin'ny seho irlandey malaza 'Blood' sy ny famoahana ho avy 'Harry Wild' miaraka amin'i Jane Seymour.
Lahatsoratra iray nozarain'i Hartes Of Kildare (@harteskildare)
Midira ao Hartes ary miala sasatra eo akaikin'ny afo dia mankafy ny sakafony miavaka ahitana labiera vita amin'ny anabaviny pub Ny Dew Drop Inn. Ny menu Hartes dia mifantoka amin'ny vanim-potoana, provenance, fanavaozana izay hita ihany koa amin'ny zava-pisotro meu miaraka amin'ny Oatmeal sy Chocolate Pale Ale izay ankafiziny amin'ny fety.
Lahatsoratra iray nozarain'i Barberstown Castle (@barberstowncastlevenue)
Cozy amin'ny afo ao Castle Barberstown, trano ambanivohitra tsara tarehy naorina tamin'ny taonjato faha-13. Ny atmosfera ao amin'ity lapa ity dia iray tsy manan-tsahala, manome antoka izahay fa hisy Krismasy tsy hay hadinoina hita ao amin'ny Barberstown Castle mihodidina ny afo misokatra.
mpivadyFood & DrinkKrismasy
Mitondrà tsiron'i Kildare ao amin'ny lakoziao
Toerana fanaovana fetin'ny Noely any Kildare
Fivarotana eo an-toerana amin'ity krismasy ity - torolàlana fanomezana ho an'i Kildare
Tea tolakandro fety ao Kildare amin'ity Krismasy ity
Ireo manam-pahaizana momba ny labiera sy divay ao Kildare dia manome ny fiarahany Krismasy tsara indrindra
Hevitra fanomezana fety avy amin'i Kildare
Mijanona ao amin'ny Castle ao Kildare
VOTE: Aiza ny sakafo maraina Kildare tsara indrindra